Monday March 28, 2016 - 19:44:59 in Wararka by Super Admin
Sade Mahad Dirir ayay dablay hubeysan ku dishay Waqooyiga Magaalada Muqdisho 28,March,2016
Dad ku sugan degmada Huriwaa ee magaalada Muqdisho ayaa warbaahinta u sheegay in dablay hubeysan ay gudaha degmadaasi ku toogteen Sade Mahad Dirir oo uu dhalay ganacsadaha caanka ah ee Mahad Dirir.
Sade ayaa la sheegay in uu muddo Afar sanadood ah ku sugnaa magaalada Muqdisho halkaasi oo uu howllo ganacsi ka waday wuxuuna xubin ka ahaa guddi ay leeyihiin qurba joogta soomaalida.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in ganacsade Mahad Dirir ay dileen kooxo loo malaynayo in ay xiriir laleeyihiin sirdoonka dowladda Federaalka marka loo eego goobta dilku ka dhacay iyo qaabka ay wax u dileen.
Inkastoo aan si rasmi ah loo ogayn cidda dishay ganacsade Sade Mahad Dirir hadane bilihii lasoo dhaafay ayuu murun baahsan oo ku aaddan lahaashiyaha boosas iyo guryo kala dhaxeeyay mas’uuliyiin katirsan Ururka Damul Jadiid ee Xasan Sheekh madaxda ka yahay.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay waxay sheegayaan in Mid kamida Xaasaska Madaxweyne Xasan Sheekh ay dhowr mar hanjabaad u jeedisay Sade Mahad Dirir iyadoo ku eedaysay in uu iibsaday guryo hanti dowladeed ah.
Guddoomiyihii Hore ee gobolka Banaadir Muungaab ayay dhowr mar Sade Mahad isku qabteen lahaashiyaha guryo kuyaal halka ay iska galaan degmooyinka Yaaqshiid iyo Huriwaa Ee Waqooyi Bari magaalada Muqdisho.
Magaalada Muqdisho sanadadii lasoo dhaafay waxaa kajiray dhul boob baaxad leh iyadoona qoyska talada haya ay xoog kula wareegeen guryo dad shacab ah leeyihiin, ma ahan wax cusub in qof caan ah shaqadiisa ama hantidiisa laga disho horay ayay falal nuucaan oo kale ah uga dhaceen degmooyinka gobolka Banaadir.